UYIFUMANA PHI KWAYE UYITHENGA PHI IKOMET (KOMET) -ISINYATHELO ESILULA NGESIKHOKELO SENYATHELO - UKUTHENGA I-CRYPTO
Uyifumana phi kwaye uyithenga phi iKomet (KOMET) -Isinyathelo esilula ngeSikhokelo seNyathelo
Inyathelo 5: Trade KOMET
Inyathelo lokugqibela: Gcina i-KOMET ngokukhuselekileyo kwizipaji zehardware
Ezinye izixhobo eziluncedo kurhwebo lweKOMET
I-ERA entsha yeNgxowa-mali yeHedge eMiselweyo.
Ixabiso langoku le-KOMET yi- $ 120.80 kwaye ikwindawo ye-2491 eCoinmarketcap kwaye kutsha nje inyuke ngeepesenti ezingama-64.55 ngexesha lokubhalwa.
I-KOMET idweliswe kwinani lotshintshiselwano nge-crypto, ngokungafaniyo nezinye iimali eziphambili, ayinakuthengwa ngokuthe ngqo ngemali ye-fiats. Nangona kunjalo, unokuthenga ngokulula le ngqekembe ngokuqala uthenge i-Ethereum kuyo nayiphi na indawo yokutshintshiselana nge-fiat-to-crypto emva koko udlulisele kutshintshiselwano olunikezela ukuthengisa le ngqekembe, kweli nqaku lesikhokelo siza kukuhamba ngokweenkcukacha amanyathelo okuthenga i-KOMET .
umanyano lwamanzi okhusela isifundo
Kodwa asikenzi okwangoku, kuba i-KOMET yi-altcoin kufuneka sidlulisele yethu kutshintshiselwano ukuba i-KOMET ingathengiswa ngayo. Apha ngezantsi kukho uluhlu lotshintshiselwano olunikezela ukuthengisa i-KOMET kwiibini ezahlukeneyo zentengiso, intloko kwiiwebhusayithi zazo kunye nokubhalisela iakhawunti.
Nje ukuba ugqibile uya kuthi emva koko ubeke i-ETH kutshintshiselwano kwi-Coinbase. Emva kokuba idiphozithi iqinisekisiwe unokuthenga i-KOMET kwimbono yokutshintshiselana.
Tshintshisa iMarike yokuThengisa Isango.io (ixhaswe) I-MEXC yeHlabathi (ixhaswe) Binance (ixhaswe) 1inch Utshintshiselwano IKOMET / ETH Ukungatshintshi (V2) QHUBA / WETH
Ngaphandle kokutshintshiselana (ngentla) ngasentla, kukho iitshintshiselwano ezimbalwa ezithandwayo ze-crypto apho zinemilinganiselo efanelekileyo yokuthengisa yemihla ngemihla kunye nesiseko esikhulu somsebenzisi. Oku kuyakuqinisekisa ukuba uza kukwazi ukuthengisa iingqekembe zakho nangaliphi na ixesha kwaye iifizi zihlala ziba sezantsi. Kuyacetyiswa ukuba ubhalise kolu tshintshiselwano ukusukela ukuba i-KOMET ifakwa kuluhlu apho iya kutsala isixa esikhulu semali yokuthengisa evela kubasebenzisi phaya, oko kuthetha ukuba uya kuba namathuba amahle okurhweba!
Ukuba ucwangcisa ukugcina ('hodl' njengoko abanye besitsho, ngokusisiseko i-misspelt 'hold' ethe yaziwa ngokuhamba kwexesha) i-KOMET yakho ixesha elide, unokufuna ukukhangela iindlela zokuyigcina ikhuselekile, nangona iBinance yenye otshintshiselwano olukhuselekileyo lwe-imali yedatha apho kuye kwakho izehlo zokugenca kwaye iimali zalahleka. Ngenxa yobume beewallets ngokutshintshiselana, ziya kuhlala zikwi-Intanethi ('Iisipaji ezishushu' njengoko sizibiza njalo), ke ngoko ziveza imiba ethile yokuba sesichengeni. Eyona ndlela ikhuselekileyo yokugcina iingqekembe zakho ukuza kuthi ga ngoku ihlala ibeka kuhlobo 'lweeCold Wallets', apho isipaji sinokufikelela kuphela kwi-blockchain (okanye 'yiya kwi-Intanethi') xa uthumela imali, ukunciphisa amathuba izehlo zokubulala. Isipaji sephepha luhlobo lwesipaji esibandayo sasimahla, sisibini esenziwe ngaphandle kweintanethi kwidilesi yoluntu nakwabucala kwaye uya kuyibhala kwenye indawo, kwaye uyigcine ikhuselekile. Nangona kunjalo, ayomelele kwaye ichaphazeleka kwiingozi ezahlukeneyo.
cwangcisa i-imeyile yentsimbi kwi-ipad
Ndingayithenga iKOMET ngemali?
Ngaba zikhona iindlela ezikhawulezayo zokuthenga i-KOMET eYurophu?
Ngaba kukho amanye amaqonga okuthenga i-KOMET okanye iBitcoin ngamakhadi etyala?
Akukho ndlela ethe ngqo yokuthenga i-KOMET ngemali. Nangona kunjalo, ungasebenzisa iindawo zentengiso ezinje Iinkonzo zeNgingqi ukuthenga i-ETH kuqala, kwaye ugqibezele onke amanye amanyathelo ngokudlulisela i-ETH yakho kutshintshiselwano lweAltCoin.
Funda ngakumbi kwiziseko zeKomet kunye nexabiso langoku apha.
Uyenza njani i-tweets esidlangalaleni
imixholo engcono yeathom
I-app yemali indenza ukuba ndenze iakhawunti entsha
Umtya we-golang ukuntywila
Ungayitshintsha njani i-imeyile yam ngaphandle kwe-imeyile